Yakasarudzika Wekugadzira Webhusaiti - Mamirioni Vagadziri
Yakarongedzwa Webhusaiti Kuronga
Yakagadzirirwa Wewebhu mawebhusaiti. Isu tinoshanda nemaindasitiri ese.
Kukurumidza Dhirivhari uye iwe zvakare unowana
Yakasarudzika uye yakasarudzika Design
Huru Kugoverwa Kubata
Mahara emaEmails (maI-5 Ids emaema ane 5 GB nzvimbo yega yega)
Kudzora Panel Kusvikira
Tumira Zvinodiwa Kuda Kuziva
Akazvitsaurira uye Cloud Servers
Pamusoro pe1000 Zvigadzirwa Zvapera uye Zvichiri Kuverenga…
Zvatinoita muCustomized Websites Development
$200.00 / Mwaka
Gadzira Akaunti Maneja
01 - 7 Mapeji
Level 3 Mugadziri
2 Sarudzo Dzesarudzo
Kuzviisa pasi kune yakakurumbira SE
Mahara emaEmails (5 mail Ids / 5 GB nzvimbo)
$400.00 / Mwaka
07 - 12 Mapeji
3 Sarudzo Dzesarudzo
Basic Kutumirwa kune yakakurumbira SE
$600.00 / mwedzi
12 - 20 Mapeji
Level 4 Mugadziri
5 Sarudzo Dzesarudzo
20 Signature Mifananidzo
$ Ngatitaurei nezvehunyanzvi basa
Kutsvaga Injini Optimization
Vakazvitsaurira Servers uye Cloud Solutions
Dhizaini & Kubudirirav
• Chinodiwa Kuongororwa: Kunzwisisa zvinangwa zvevatengi, zvinonangwa vateereri, ruzivo rwakadzama hwekukumbira uye kuunganidza ruzivo rwakawanda sezvatingagone kuunganidza
• Proiler charter: Iyo projekiti charter inopeta ruzivo rwakaunganidzwa uye rwakatenderwa pane hwakatangira pfungwa. Aya magwaro anowanzoita apfupi uye asiri ekunyanyisa tekinoroji, uye anoshanda sereferendesheni muchirongwa chose.
• Yepamepu mepu: Mepu yakatsanangurwa yepaiti yakagadzirirwa iyo mumashure, vanoshandisa vanopera vanogona kurasika muchimiro kana inoda ruzivo nekukurumidza.
• Zvibvumirano zvinotsanangura madaro, copyright uye emari mapoinzi. Ichi chinhu chakakosha kwezvakanyorwa uye chinofanira kusanganisira mazwi ekubhadhara, zvikamu zvekuvhara mapurojekiti, kumiswa kwematare, kodzero yemuridzi uye nguva. Ive nekuchenjerera kuti uzvifukidze negwaro iri, asi ive yakapfupi uye inoshanda.
Iyi nhanho yekugadzira ine nezvekuenda kumberi neruzivo rwakatsanangurwa muchikamu chekuronga chiwedzerazve mukuitika. Izvo zvinonyanya kuburitswa zvakanyorwa zvinyorwa zvesaiti uye zvakanyanya kukosha, kumiririra kwekuona. Kamwe dhizaini yekugadzira yapedzwa, chirongwa ichi zvimwe kana zvishoma chatora chimiro, asi nekuda kwekusavapo kwezvakanyorwa uye zvakakosha maficha.
Slice uye kodhi inoshanda XHTML / CSS Inguva yekukodha. Kanda iyo yekupedzisira Photoshop mock-up, uye nyora iyo HTML uye CSS kodhi yekutanga dhizaini. Zvinhu zvinofambidzana uye jQuery zvinouya mushure: ikozvino, ingotora izvo zvinoonekwa pachiratidziri, uye uve nechokwadi chekuseta zvese zvekodhi usati waenderera mberi.
Code template kune yega yega peji mhando
Vandudza uye edza maitiro akasarudzika uye kubatsirana: Tinoda kuzvitarisira izvi usati wawedzera zvinhu zvemukati nekuti webhusaiti izvozvi inopa nzvimbo yekuchenesa isina hupamhi.
Edza uye simbisa ma link nekusevenza: Zvino isu tinotarisa saiti tichishandisa yako faira maneja seyambiro hauna kana kumbopotsa chero chinhu muchionekwa kana mushe.
Chinangwa chikuru chechikamu chekutanga ndechekugadzirira iyo projekiti kuti ione veruzhinji. Izvi zvinoda kupedzisira kupukutwa kwezvinhu zvekugadzira, kuyedzwa kwakadzama kwekupindira uye maficha uye zvakanyanya kukosha, kutariswa kwechiitiko chemushandisi.
Polishing: Chikwata chedu chinotaridza mativi eprojekiti anogona kuvandudzwa.
Chinjana kune live server: Yedu yekupedzisira mamonari ongororo yehupenyu projekiti inoitika ikozvino.
Kuedza: Zvino, isu taizo mhanyisa yekupedzisira diagnostics tichishandisa ese aripo maturusi: spell-Checker, kodhi mvumo, webhusaiti hutano hwekutarisa, yakaputsika-link yekuongorora, nezvimwe.
Cross-browser uye Kupindura cheki: Chikwata chedu chinoongorora chirongwa chiri mumazhinji mabhurawuza seIE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, iPhone, BlackBerry, nezvimwe.
Yedu masevhisi eSevhisi anopihwa kune rakasiyana emabhizinesi eese marudzi uye makuru. Isu tinoshumira, pakati pevamwe, maindasitiri anotevera:
Dhijitari & High-Tech
Kuendesa uye kutora zvinhu
Zvigadzirwa zvevatengi uye zvakazara
IT uye telecommunication
Mabasa emari uye kubhengi
Inobatsira ma Links muCustom Webdesigning